Artel Video Systems သည် xView Management Platform ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များကြေညာချက်များ xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များကြေညာချက်များ xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း
xView DigiLink, InfinityLink နှင့် SMART ပလက်ဖောင်းများ၏ကွန်ယက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစှမျးတိုးချဲ့
WESTFORD, Mass ။ - ဇူလိုင်လ 31, 2018 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များဆန်းသစ် Real-time ၏တစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်မီဝန်ဆောင်မှုပေး မာလ်တီမီဒီယာ ဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်သည် xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။
xView ကြောင်း Artel ရဲ့ DigiLink, InfinityLink နှင့် SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်း™ဖြေရှင်းချက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအတွက်အကူအညီအထောက်အပံ့များကိုအော်ပရေတာတစ်ဦးကို browser-based, ကွန်ယက်-Level စောင့်ကြည့်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒေသဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး: အဆိုပါပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဗိသုကာကိုထောကျပံ့ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ xView SNMPv2 မှတဆင့် Artel ရဲ့ကွန်ယက်ကို element တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလွယ်ကူ-to-ဖတ်မြေပုံများ, ဂရပ်များ, နှင့်ဇယားအတွက်နှိုးစက်၏တည်နေရာနှင့်အဆင့်အတန်းကိုပြသနေတဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ network ပေါ်မှာ DigiLink နှင့် InfinityLink ကိုယ်ထည်တစ်ခုစုစုပေါင်းအမြင်ပေးပါသည်။ အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာအမှားနေရာချထားပြီးတော့အမှားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရောဂါရှာဖွေရေး, configuration များ, နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် xView အတွင်းမှ DL မန်နေဂျာနှင့် IL Manager ကိုအစည်းအဝေးများဖွင့်နိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူများ software ကို download လုပ်မှတဆင့်ပလက်ဖောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို add သို့မဟုတ် upgrade လိမ့်မည်။
"ဟုအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်တန်းဖြစ်လာပိုပြီး IP ကိုဗဟိုပြု Workflows, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှု, ကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း, ကုန်ကျ-ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆက်လက်သကဲ့သို့" ရာဖေးလ် Fonseca, Artel မှာဒုတိယသမ္မတကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုကပြောပါတယ်။ "ဒီ xView ပလက်ဖောင်း DigiLink, InfinityLink နှင့် SMART ဖြေရှင်းချက်သူတို့စီမံခန့်ခွဲဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးများထားရှိဘို့မရှိမဖြစ်ကွန်ရက်စောင့်ကြည့်မှုစွမ်းရည်များပေးပါသည်။ "
Artel IBC2018 စဉ်အတွင်းမှာ IP ကွန်ယက်ကိုသရုပ်ပြအတွက် xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ တက်ရောက် Artel ရဲ့ xView နှင့် SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းအဖြစ်အိုင်ပီဖြေရှင်းချက်၏ကုမ္ပဏီ၏အပြည့်အဝ suite ကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် (5.A65) ရပ်ဟာ Artel အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Artel အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.artel.com.
အလည်အပတ် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ IBC2018 မှာရပ် 5.A65
အကြောင်းအရာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ဆန်းသစ် Real-time ၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည် မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ။ ယနေ့ US မှာအများဆုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်-အရေးပါ Workflows ကိုထောကျပံ့ဖို့ Artel ထုတ်ကုန်ဖြတ်သန်း။ IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based နည်းပညာများအတွက် Artel ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု 30 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုအထိချဲ့ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရလက်တွဲဖော်အဖြစ် Artel ထူထောင်ခဲ့သည်။ Artel ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက် fiber- နှင့် IP-အခြေပြုပါဝင်သည် မာလ်တီမီဒီယာ ဖြန့်ဝေ, ဒေတာကွန်ရက်, IP ကို ​​streaming များနှင့်တိကျစွာအချိန်ကိုက်။ Artel အနေနဲ့ဝန်ထမ်းပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/180731Artel.docx
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/Artel-xViewManagement-Platform.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ xView စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ဒေတာကွန်ရက် Ethernet switches များ IBC2018 IP ကို ​​streaming များစနစ်များ အိုင်ပီ-based မီဒီယာပေးပို့ OTT စနစ်များ Real-time မာလ်တီမီဒီယာပေးပို့ 2018-07-31
ယခင်: Viaccess-Orcas IBC2018 ပြသခဲ့သည်ကို Preview
နောက်တစ်ခု: IHSE KVM စနစ် EVS ဌာနချုပ်မှာသွက်လက်သင်တန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Flexible ကုန်ပစ္စည်းဒီမိုများဖွင့်ပေး